Nepali New Year / Mesh Sankranti / Biska Jatra/Mahavir Jayanti/Pradosh Vrata | नयाँ वर्ष / मेष संक्रान्ति / बिस्का: जात्रा/महावीर जयन्ती/प्रदोष व्रत | २०७९ वैशाख १ | Hamro Patro
बिहानको ०६ : ०२
चैत शुक्ल त्रयोदशी
नयाँ वर्ष / मेष संक्रान्ति / बिस्का: जात्रा/महावीर जयन्ती/प्रदोष व्रत ( Nepali New Year / Mesh Sankranti / Biska Jatra/Mahavir Jayanti/Pradosh Vrata )
नयाँ वर्ष २०७९ प्रारम्भ | बिस्का: जात्रा | महावीर जयन्ती
नयाँ वर्ष २०७९ प्रारम्भ | बिस्का: जात्रा | महावीर जयन्ती विशेष अडियो सामग्री
सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नव वर्ष २०७९ सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना । हरेक नकारात्मक शक्तिहरूलाई २०७८ मै छाडेर सकारात्मक उत्साह र उर्जा लिएर अघि बढौँ । सबैलाई सुख, सुस्वास्थ्य र समृद्धिको कामना ।
यहाँहरूले २०७९ को तिथि मिति, चाडपर्व, शुभ साइत, सार्वजनिक बिदाहरू लगायतका सम्पूर्ण जानकारीहरू “हाम्रो पात्रो”मा पाउनुहुनेछ । आगामी वर्षहरू जस्तै यस वर्षपनि हजुरहरूको अपार मायाको अपेक्षा राख्दछौँ ।
विक्रम सम्वत् के हो ?
भारतको उज्जैनका पौराणिक राजा विक्रमादित्यले चलाएको सम्वत्‌को रुपमा विक्रम सम्वत्‌लाई चिनिन्छ । तर, यसलाई पुष्टि पार्ने गरि कुनै तथ्य फेला नभएको हुँदा विक्रम सम्वत्‌को बारेमा धेरै रहस्यहरू छन् । केही इतिहास विद्‌हरूले विक्रमादित्यको अस्तित्वको पुष्टि नभएको हुँदा बिक्रम सम्वत् नेपालको मौलिक सम्वत् भएको तर्क समेत गर्दछन् । अहिले विश्वभरि नै यो सम्वत्‌लाई अधिकारिकता दिएको देश नेपाल मात्र हो । अन्य एसियाली राष्ट्र भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा भने यसलाई सांस्कृतिक क्यालेण्डरको रुपमा लिइन्छ । यो सम्वत् सूर्य मेष राशीमा प्रवेश गरेको दिन अर्थात् बैशाख १ गतेबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यसैले आजको दिनलाई मेष संक्रान्ति पनि भनिन्छ ।
कसरी शुरु भयो विक्रम सम्वत् ?
कसैले विक्रम सम्वत्‌को सुरुवात राणा कालमा चन्द्र शमशेरको पालोमा भएको थियो भन्ने गर्दछन् भने कसैले राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले अधिकारिकता दिई सरकारी सम्वत्‌को औपचारिक मान्यता दिएको तर्क गर्छन् । तर, लिच्छवी, मल्लकाल , सेनवंश अनि पृथ्वी नारायण शाहका शिलालेखहरूमा विक्रम सम्वत् उल्लेख भएकाले यो कथन झुटो ठहरिन्छ भन्ने मतहरू पनि पाइएको छ । विक्रम सम्वत् भन्दा अगाडि नेपालमा नेपाल सम्वत् र शक् सम्वत्‌को प्रयोग हुने गरेको कथनहरू सुन्न पाइन्छ ।
यो इस्वी सम्वत् भन्दा कति अगाडि छ ?
विक्रम सम्वत् अङ्ग्रेजी सम्वत् अर्थात् “AD” भन्दा ५६ दशमलव ७ वर्षले अगाडि छ । त्यसैगरी, यो नेपाल सम्वत् भन्दा ९ सय ३६ वर्ष ६ महिना अगाडि छ भने शक् सम्वत् भन्दा १३५ वर्ष अगाडि , कली सम्वत् भन्दा ३०४४ वर्ष पछाडि र हिजरी सम्वत् भन्दा ६३६ वर्ष अगाडि छ ।
के नेपालमा विक्रम सम्वत्‌लाई मात्र नयाँ वर्षको रुपमा मनाइन्छ ?
हैन, नेपालमा विक्रम सम्वत् बाहेक जनवरी १ मा अङ्ग्रेजी नव वर्ष, नेपाल सम्वत्‌को नयाँ वर्ष, किराँत तथा थारू समुदायले माघ १ गते मनाउने नयाँ वर्ष र गुरुङ्ग, शेर्पा लगायतका हिमाली र पहाडी समुदायका मानिसहरूले आफ्नो छुट्टै नयाँ वर्ष (ल्होसार) उत्तिकै हर्ष र उत्साहका साथ मनाउँदछन् ।
विक्रम सम्वत्‌लाई चन्द्रमास किन भनिन्छ ?
विक्रम सम्वत्‌का समग्र तिथि मितिहरू पृथ्वी र चन्द्रबीचको कोण अनि अवस्थितिमा फरक पर्दछन्, त्यसैले यसलाई चन्द्रमास भनिएको हो।
चन्द्रमासमा समयलाई कसरी मापन गरिन्छ ?
चन्द्रमा र सूर्यबीचको देशान्तरीय कोणको १२ डिग्रीको वृद्धि हुने समय मापलाई तिथि भनिन्छ, सामान्यतया एउटा तिथि १९ देखि २६ घण्टासम्मको हुन्छ । पक्ष भन्नाले १५ वटा तिथिहरू हुन् र “कृष्ण र शुक्ल” पक्ष गरि दुईवटा पक्षहरू हुन्छन् । दुईवटा पक्षहरू मिलेर लगभग २९ दशमलव ५ तिथिको एउटा मास हुन्छ । नयाँ चन्द्र उदाएपछि कृष्ण पक्षको अँध्यारो निष्पट्ट समयसम्मको पक्ष एक मास हो । २ मासको एक ऋतु हुन्छ, ३ ऋतुको एक आयना हुन्छ अनि एक वर्ष भनेको २ आयना हो ।
नयाँ वर्षको दिन पर्ने अन्य विशेष पर्वहरू के के हुन् ?
नयाँ वर्षको दिन भक्तपुरमा बिस्का: जात्रा, तराईमा सिरुवा पर्व, जुडशीतल, ठिमीमा जिब्रो छेड्ने जात्रा, सिन्दुर जात्राहरू पर्दछन् ।
जिब्रो छेड्ने जात्रा
बोडेमा नीलबाराही क्षेत्र आसपासमा बस्ने मानिसहरूलाई भूतप्रेतले धेरै दुःख दिने गर्नाले तान्त्रिक विद्या अनुसार भीमदत्त नामक तान्त्रिकले दुःख दिने पिशाचलाई समातेर त्यसको जिब्रो छेडेर, बलेको महाद्वीप बोकाएर, बोडे घुमाएपछि त्यस क्षेत्र आसपासका मानिसहरूलाई पिशाचले दुख नदिने, रोग, अनिकाल, महाभूकम्प हुन नदिने बाचा गरेको थियो। त्यसपछि, ठिमीमा यो जात्रा मनाउने परम्परा चलेको हो ।
चैत्र बैशाखमा हावाहुरी चल्ने र आगो लाग्ने सम्भावना धेरै हुने भएकाले पूर्वी तराइका मानिसहरूले आफ्नो घरको छत, बोट बिरुवा, तुलसी मठहरूमा शुद्ध जल चढाएर आफ्नो कुल देवताको पूजा गर्दै सिरुवा पर्व मनाउँछन् । यस दिन ठूला बडाले हातमा शुद्ध जल लिएर आफूभन्दा सानोको टाउकोमा छ्‌यापी शुद्ध सोच अनि सुस्वास्थ्यको आशीर्वाद स्वरूप जुडशीतल गर्ने गर्दछन्। सानोले भने ठूलोको खुट्टामा जल चढाएर आशीर्वाद लिने गर्दछन् । यो वर्षको पहिलो पर्व भएकाले थारू भाषामा यसलाई “सिरुवा” भनिएको हो । यस समुदायले मनाउने वर्षको अन्तिम पर्व भने “फगुवा” हो । जसलाई ‘फागु पूर्णिमा” होली पनि भनिन्छ ।
सिन्दुर जात्रालाई बिस्का जात्राको एउटा अंशको रुपमा लिइन्छ । ठिमीमा ३२ खटका दिदीबहिनीको भेट भएको खुसियालीमा मनाइने यो जात्रा साथीभाइसँग फुस्रो सिन्दुर लगाएर, विभिन्न देवताहरूलाई खटमा राखी बालकुमारी मन्दिर परिक्रमा गर्दै मनाइन्छ ।
बिस्का: को अर्थ “साप मर्यो” हो । किम्वदन्ती अनुसार भक्तपुरका एक प्रतापी राजाको छोरी अत्यन्तै सुन्दरी राजकुमारीको विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानको मृत्यु हुन्थ्यो । हरेक बिहान राजकुमारीको शयन कक्षबाट राजकुमारको लास उठाइन्थ्यो । एकदिन एक साहसी राजकुमारले सबै थाहा पाएर पनि राजकुमारीसँग विवाह गरे । विवाहको राति राजकुमारी निदाएपछि उनको नाकको प्वालबाट दुईवटा नागनागिनी निस्केर अजिङ्गरको रूपधारण गरी राजकुमारलाई डस्न लाग्दा राजकुमारले आफ्नो खड्गले काटेर ति नागनागिनीलाई दुई टुक्रा पारिदिए । प्राण त्याग्नु अगाडि ति नागनागिनीहरूले आफ्नो लागि जात्रा चलाइदिनु हुन आग्रह गरे । भोलिपल्ट बिहान सधैंझैँ राजकुमारको लास लिन जाँदा राजकुमारलाई जीवित अनि नागनागिनलाई मरेको देखेर प्रतापी राजा खुशी भए । त्यसबेला देखी साप मरेको खुशीमा बिस्का: जात्रा मनाइन्छ । यो कथा भ्रम मात्र हो भन्ने तर्कहरू भने धेरैले गर्दै आएका छन् । यो जात्रा नयाँ वर्षको चार दिन अगाडिदेखि सुरु भएर नयाँ वर्षको पाँचदिन पछिसम्म मनाइन्छ ।
बिस्का: जात्रालाई किन बिस्केट भनिएको हो ?
बिस्का: यो जात्राको पुरानो र मौलिक नाम हो, बिस्केट हैन । स्थानीय भाषामा यसलाई “द्य क्वहाँबिज्याइगु” पनि भनिन्छ । कहिले बिसिका, कहिले बिस्क त कहिले बिक्का, बिस्का: शब्द विस्तारै अपभ्रंशीत भएर बिस्केट हुन पुगेको हो ।
कसरी मनाइन्छ बिस्का: जात्रा ?
टौमढीस्थित न्यातपोल मन्दिर अघिल्तिर राखेर हरेक वर्ष चैत महिनामा भैरवनाथ र भद्रकालीको रथलाई तयार गरिन्छ । जात्राको पहिलो दिन पाँचतले मन्दिर प्राङ्गणबाट उक्त रथ क्वने र थनेका बासिन्दाले अगाडि र पछाडिबाट तानातान गरेर आ–आफ्नो टोलतर्फ लैजाने गर्दछन् । यो तानातान जात्राको मुख्य आकर्षण हो । पछि रथलाई तानेर खल्ला टोल लगिन्छ । चौथो दिन ५५ हात लामो लिङ्गो उभ्याइन्छ । पुरानो वर्ष गएर र नयाँ वर्षको आगमनको पूर्वसन्ध्यामा लिङ्गो उभ्याउने गरिन्छ । लिङ्गोको कोखामा झुन्ड्याइएका दुई ध्वजालाई वीर ध्वजा र विश्व ध्वजा भनिन्छ । एकजोडी ध्वजा फुकाएपछि एउटा संवत्सर फेरिने हुनाले बीचमा फुकाएर हेर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । लिङ्गो उभ्याउन बाँधिएका आठ डोरीलाई अष्टमात्रिकाको प्रतीक मानिन्छ । लिङ्गो उठाएको हेर्नाले शत्रु नास हुन्छ भन्ने मान्यता छ त्यसैले यस जात्रालाई ‘शत्रुहन्ता जात्रा’ पनि भनिन्छ । पाँचौं दिन लिङ्गो ढालिन्छ । त्यसपछि, भैरवनाथ र भद्रकालीको रथलाई एकापसमा जुधाउने गरिन्छ ।
को हुन् भगवान महावीर ?
सिन्धुघाँटी सभ्यताको प्राचीन धर्महरू मध्यको एक जैन धर्मका प्रवर्तक अनि २४ औं तीर्थकर भगवानको रुपमा भगवान वर्द्धमान महावीर लाई चिनिन्छ । यस धर्मका पहिलो तीर्थकर ऋषभदेव र अन्तिम तीर्थकर स्वामी महावीर नै हुनुहुन्छ । महान दार्शनिक महावीर, जैन धर्मका संस्थापक र सुधारक हुन् । महावीरको जन्म इशापूर्व भन्दा ५९९ वर्ष पहिला लिच्छवि वंशका राजा श्री सिद्धार्थ र माता त्रिशला देवीको कोखबाट कुण्डग्राममा भएको थियो । महावीरको जन्म हुनु पहिला उनकी माता त्रिशलाले १६ खालका सपना देखेकी थिइन् । ती सपनाहरूमा हात्ती, साँढे, सिंह, लक्ष्मी, फूल, पूर्ण चन्द्रमा र सूर्यहरू थिए । जैन धर्ममा तीर्थकरहरूको जन्म हुनु अगाडि जन्म दिने आमाले उल्लेखित कुराहरू सपनामा देखेका हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ । आज भगवान महावीरको २६२० औँ जन्मजयन्ती हो ।
महावीर स्वामीको पञ्चशील सिद्धान्त के के हुन् ?
अहिंसा - इन्द्रिय भएका जीवहरूको हिंसा नगर, उनीहरूको रक्षा गर
अपरिग्रह - कुनै सजीव या निर्जीव कुराको संग्रह नगर, संग्रह गर्ने मानिसले दुखबाट छुटकारा पाउँदैन
ब्रह्मचर्य - जो पुरुष महिलाहरूसँग सम्बन्ध राख्दैनन् उनीहरू मोक्ष मार्गतर्फ अघि बढ्छन्
सत्य- सधैँ सत्य वचन बोल्नु
अस्तेय - कुनै कुराको पनि चोरी नगर्नु
प्रदोष भनेको के हो ?
त्रयोदशीलाई प्रदोष भनिन्छ । एकादशी जस्तै हरेक महिना प्रदोष पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ, एकादशीमा विष्णुलाई स्मरण गरिन्छ भने प्रदोषमा शिवको स्मरण गरिन्छ । प्रदोष काल सूर्यास्त हुनुभन्दा ४५ मिनेट अगाडि सुरु हुन्छ र सूर्यास्तको ४५ मिनेटपछि समाप्त हुन्छ। प्रदोष कथा चन्द्रमा को क्षय हुने रोग अर्थात् चन्द्रमाको प्रभाव कम हुँदै जाने अवस्थामा भगवान् शिवले त्रयोदशीका दिन चन्द्रमाको रोग निवारण गरिदिनुभएको शास्त्रमा उल्लेख छ । यस कारणले हरेक महिनाको त्रयोदशीमा भगवान् शिवको स्मरण गर्दै प्रदोष व्रत मनाइन्छ । त्रयोदशी तिथि भगवान् शिवको पूजा गर्नका लागि उत्तम हो। तर प्रदोषको समयमा शिवको आराधना गर्नु अझ फलदायी हुन्छ।
प्रदोष व्रत कहिले गर्ने ?
प्रदोष व्रतको पूजा आफ्नो नगरको सूर्यास्तको समय अनुसार प्रदोष कालमा गर्नुपर्छ।
प्रदोषमा के नगर्ने ?
प्रदोषको समयमा भगवान् शिवको पूजा नगरी भोजन नगर्नुहोस्। व्रत बस्दा खाना, नुन, खुर्सानी आदिको सेवन नगर्ने ।
प्रदोष व्रतमा पूजाको थालमा के राख्ने ?
पूजा थालीमा अबीर, चन्दन, कालो तिल, फूल, धतुरा, बिल्व पत्र, शमी पत्र, जनै, दीप, कपूर, अगरबत्ती र फलफूल राखेर पूजा गर्ने ।